Ukuphupha ngesidlo sangokuhlwa Discover Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Kubantu abaninzi, isidlo sangokuhlwa sisidlo esidliwa nosapho lonke. Amaxesha ngamaxesha, ayisiyokutya kuphela, kodwa nokuhlala kunye kudlala indima ebalulekileyo. Amava kunye neengcinga ezidlale indima emini yonke kwaye zigcina amalungu osapho exakekile ziyatshintshiswa.
Njengophawu lwephupha, isidlo sangokuhlwa sinakho ukwenzeka, kuba abanye abantu bakwaphupha besitya kunye kunye kunye nosapho. Ukutolikwa kwala maphupha kubaluleke ngakumbi ukuba kuthathele ingqalelo imeko yeemvakalelo ephupheni. Ngaba imeko yomoya yayihlala okanye bekukho iingxabano okanye ukungavisisani?
1 Uphawu lwephupha «isidlo sangokuhlwa» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «isidlo sangokuhlwa» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «isidlo sangokuhlwa» - ukutolikwa kokomoya
Uphawu lwephupha «isidlo sangokuhlwa» - ukutolikwa ngokubanzi
Kwiimeko ezininzi, isimboli sephupha "isidlo sangokuhlwa" sithembisa into entle: iyabhengeza mpu melelo y Suerte phakathi. Oku kungabhekisa kwiindawo ezahlukeneyo zobomi. Kungenzeka ukuba iphupha liza kufumana isibonelelo semali, oko kukuthi, kwilotto, kwilifa okanye kwisipho.
Kwangelo xesha, isidlo sangokuhlwa ephupheni sinokubonisa impumelelo yobungcali kunye namandla amatsha alo mntu kuthethwa ngaye. Uya kuba nakho ukuphumeza okuninzi kwikamva elikufutshane kwaye ngale ndlela uyakuzanelisa wena kunye nabanye.
Ukuba ukugxila ephupheni kuncinci ekutyeni uqobo kunokuhlala, abantu abo iphupha lihleli nabo kwitafile yegumbi lokutyela, oku kukwaluphawu lwento entsha. Ingqondo yoluntu. Imisa imvumelwano entsha kwimeko-bume yentlalo.
Ukuchasana kusebenza ngokutolikwa ngokubanzi kwamaphupha, ukuba imeko engalunganga ixhaphakile ngexesha lesidlo ephupheni, kukho impikiswano okanye kukho ukuthula okuzolileyo, umntu ekubhekiswa kuye akanawo umdla wokutya. Oku kunokuba luphawu lokuba iphupha ligutyungelwe yindima yalo kwezentlalo kubomi bokwenyani. Usapho kunye nabahlobo bakhe banokulindela okuninzi kuye kwaye angaziva ediniwe kukusoloko "esenza" kwaye kufuneka aphile ngokuvisisana nesikhundla sakhe kwimo yezentlalo. Ulangazelela inkululeko engakumbi noxolo.
Uphawu lwephupha «isidlo sangokuhlwa» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo, amaphupha ngesidlo sangokuhlwa ahlala ebonakalisa intshutshiso. Unión okanye usapho olulolwakhe. Ukuphupha ulangazelela ukhuseleko lokukwazi ukubuyela ekhaya ebusuku kwaye wamkelwe apho ngokhuseleko losapho okanye ubuncinci iqabane. Unokufuna ulwalamano olutsha okanye ungathanda ukuqala usapho. Oku kuyinyani ngakumbi ukuba uphawu lwephupha "isidlo sangokuhlwa" liphindaphindwa rhoqo.
Ngaphandle kwale ndlela yokutolika, okuchaseneyo kuyasebenza ukuba imeko etafileni ayimnandi: iphupha alibonanga ukuba inkululeko engakumbi Ufuna ngokwakho kwaye uziva uthintelwe.
Uphawu lwephupha «isidlo sangokuhlwa» - ukutolikwa kokomoya
Ngokwenkcazo yomoya, amaphupha ngesidlo sangokuhlwa angumqondiso we Umhlalaphantsi. Umntu ochaphazelekayo ngokomfuziselo uthatha isidlo sakhe sokugqibela, esiya kulandelwa kukuncinci okanye kungabikho kwanto.